Sida loo soo dejisto barnaamijyada kaliya ee WiFi-ka ah ee ku jira 'Huawei AppGallery | Androidsis
Huawei waxay si xoog leh sharad ugu gashay inay haysato dukaan codsi u gaar ah oo ay si toos ah ula tartanto hoggaamiyaha, Google Play Store. Dhowr toddobaad ka hor, AppGallery wuxuu cusboonaysiiyay naqshaddiisa iyadoo la horumariyay muuqaalka tusmada, iyadoo lagu sharaddaynayo helitaanka barnaamijyo cusub iyo sidoo kale muujinta ugu dejinta xilligan.
Milkiilayaasha aaladda Huawei waxay leeyihiin suurtagalnimada inay ka soo degsadaan agab kasta dukaankiisa oo leh xiriir Wi-Fi iyo xog ah, in kasta oo midka lagu taliyay had iyo jeer yahay kan ugu horreeya. Haysashada xiriir aan xadidnayn macno malahan, laakiin waxaas oo dhami waxay isbadalayaan hadii heerkaagu yahay 2-3 GB bishii.
para si aad u awoodo inaad kala soo baxdo barnaamijyada kaliya WiFi-ga Huawei AppGallery waxaad u baahan tahay inaad wax ka bedesho sidaa darteed had iyo jeer waxay ku xiran tahay isku xirka guriga, shaqada ama qodob kale oo caadi ah. Isticmaaluhu wuxuu ku dooran karaa tan xulashooyinka dukaanka caanka ah wuxuuna xaddidi karaa isticmaalka xogta moobiilka.
Sida loo soo dejisto barnaamijyada kaliya WiFi ee AppGallery
AppGallery wuxuu leeyahay barnaamijyo badan oo qabow, ciyaaro khaas ah mararka qaar, hadiyado mararka qaarkood iyo xulashooyin kale oo badan oo gudaha ah. Waxaa jira meel kale oo lagu kaydiyo Play Store haddii aad tahay isticmaale Huawei / Maamuus, adeegso Dukaanka Aurora, waa dukaan kale oo lagu kaydiyo dukaanka Google.
Si aad u soo degsato barnaamijyada kaliya WiFi ee AppGallery waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku fur dukaanka AppGallery qalabkaaga
Guji "I" dhinaca midig ee hoose
Gudaha «I» marin u helka ikhtiyaarka «Settings»
Ikhtiyaarka ku qoran "Ku soo degso codsiyada xogta moobiilka" guji "Maya" si aad kaliya ugu soo dejiso WiFi
Tani waxay kaa badbaadin doontaa xog badan haddii aad ku sugan tahay meel aad marin ugu heli karto xiriirka WiFi, isla sidaas ayaa dhacaya haddii aad rabto inaad cusboonaysiiso codsiyada, Gudaha gudihiisa halka ay ku qoran tahay "Cusboonaysiinta barnaamijyada si otomaatig ah" u hubso inay ku qoran tahay "Kaliya WiFi" haddii taleefanka lagu cusbooneysiiyo qorshahaaga xogta.
Marar badan ayaan la yaabnay markaan dhaafnay xadka xogta ee qiimaheena markaan soo degsaneyno barnaamijyada ka baxsan guriga, wax aan iska ilaalin karno. AppGalleryku wuxuu leeyahay dhowr meelood oo ka hooseeya "Aniga" waana fiicantahay in la fiiriyo oo la habeeyo mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Sida Loogu Soo Degsado Barnaamijyada WiFi-Kaliya ee ku saabsan Huawei AppGallery
Realme 7i waxay timid Yurub iyadoo Helio G85 iyo Android 10 ay tahay nidaam ahaan
Sixir Arena Uruurinta ayaa timid si ay u qaadato GWENT, Legends of Runeterra iyo Hearthstone